lundi, 06 juin 2016 22:48
Ambodibonara RN2 : Fiarabe nivadika
Nitrangana lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena faha-2 tao Ambodibonara, Distrikan’i Toamasina II omaly alahady 5 jona tolakandro. Soa fa tsy namono olona fa ny fiarabe nibaby kaontenera no simba. Voalazan'ny mpamily fa vao fanintelony haka entana ao Toamasina ity fiarabe entiny ity no izao niharan-doza izao. Milaza kosa ireo mpamily fiarabe mampiasa ny lalam-pirenena faha-2 fa betsaka ny tsy fifanajana amin'ny samy mpamily ka izao mitera-doza lava izao, satria kamiao maty an-dalana tsy nanao "polisy" na marika ahalalana ny fahavoazany tao anaty fiholanana no nitarika ny loza raha niezaka niala izany ilay fiarabe.
dimanche, 05 juin 2016 17:41
Toliara: Radio vaovao
Hisokatra tsy ho ela ny radio vaovao "Tseriky nareo laha" ao antampo-tanànan'ny Toliara. Efa tonga avokoa ny fitaovana, izay radio n'ny Sekretera Jeneralin'ny Ministeran'ny Serasera Guy Laurent Ramanakamonjy.
vendredi, 03 juin 2016 15:00
Mahajanga : Misantatra ny Fetim-pirenena
Niatomboka androany 03 jona ny hetsika rehetra ahafahana manamarika ny fetim-pirenena izay eo ambany fitarihan'ny prefektioran’i Mahajanga sy ny Fiadidiana ny faritra Boeny. Nisy ny diabe namakivaky ny tanàna nandraisan'ireo mpiasa avy amin'ny sampan-draharahampanjakana anjara, natao androany ary nifarana manoloana ny Lapan'ny tanàna.
vendredi, 03 juin 2016 12:18
SAVA: Diso fiantefa ny lay misy ody moka nozaraina
Mbola maro ny olona tsy mahalala ny tokony hampiasana ireny lay misy ody moka izay nandanian'ireny mpamatsy vola mba hiarovana ny vahoaka Malagasy amin'ny aretina tazomoka. Any amin’ny faritra SAVA izao dia ampiasain’ny olona amin'ny zaridaina ary hanaratoana ihany koa ny ankamaroan'ireny lay misy ody moka vao nozaraina farany teo ireny.
jeudi, 02 juin 2016 18:18
Befandriana Atsimo: Velona ahiahy ny mponina amin'ny firongatry ny valala
Taorian'ny fandalovan'ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Befandriana Atsimo, raha nitokana ny tetezana izay fotodrafitrasa tamin'ny Filoha Andry Rajoelina no nikarakara azy, dia feno andiambalala tampoka ny tanàna. Lasa resabe eo anivon'ny mponina izany, ka misy ny manontany tena raha nisy ota fady nataon'ireo vahiny. Misy kosa no miresaka fa ny Ray aman-dreny tao an-tanàna, toa an'ny Solombavambahoaka Lucien Rakotomalala tsy neken'ny Filoha andray fitenenana satria hoe Mapar, no mahatonga izany. Izany moa resaka mampiahiahy ny mponina, fa hatreto dia tsy mbola misy paika mazava avy amin'ny fanjakana ity ady amin'ny valala any atsimo ity. Maro aza ny tsy mandray karama sy tsy misy fanafodim-balala intsony ireo sampandraharaha mikarakara izany.
jeudi, 02 juin 2016 11:54
Befandriana Atsimo : Dinabe ho an'ny fandriampahalemana
Ny Dinabe izay karazana andrimasom-pokonolona no miahy ny tanàna sy ny mponina amin'izao any Befandriana Atsimo. Marihina fa ny ankabeazan'izy ireo dia dahalo niova fo avokoa.
Page 458 sur 514